🥇 ▷ Hotline Miami Collection ayaa ku dhawaaqay Nintendo Switch ✅
Hotline Miami Collection ayaa ku dhawaaqay Nintendo Switch
Nintendo Switch Waxaa loo mideeyay mid ka mid ah consoles-yada aad ugu jeceshahay si loogu raaxeysto ciyaaro madax banaan Dhacdadii ugu dambaysay, Nintendo wuxuu xaqiijiyay tiro badan oo la siidaayay qaarna ay aad ugu qanacsan yihiin cayaartoyda console-ka.
Kii hore wuxuu ahaa Hotline Miami Ururinta. Sida magacu u muuqdo, aruurinta waxaa ka mid ah gaarsiinta labada eray ee dhiiga iyo xiisaha leh ee uu leeyahay Jonatan Söderström, Dennis Wedin waxaana u qaybiyay Devolver Digital.
Cinwaanadu waxay hayaan dhammaan ficilkii qaabkoodii asalka ahaa, iyadoo faa iidada ugu jirta lagu raaxeysan karo hab la qaadan karo. Sida ugu fiican, uma baahnid inaad sugto inaad ciyaarto, sababtoo ah aruurinta ayaa laga heli doonaa maanta eShop-ka. Waad ku iibsan kartaa iyada oo lagu beddelayo $ 24.99 USD.
Khadka aruurinta ‘Hotline Miami Collection’ waxaa ku jira labadaba ciyaar si xun-adag oo kulul iyo ciyaaro-Khadka kulul ee ‘Hotline Miami’ waana la heli karaa TODAY #NintendoSwitch #eShop! #IndieWorld
– Nintendo of America (@NintendoAmerica) Ogast 19, 2019
Dhanka kale, usbuucaan waxaan helnay macluumaad ku saabsan suurtogalnimada bilaabashada SUPERHOT in console Beelaha. Macluumaadkaasi run buu ahaa, sidaa darteed dekeda ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyay xaflada Indie World.
Qofka ugu horreeya toogashadu waxaa ku amaanay ciyaartoy badan, sababtuna u ahayd farsamoyaqaannadiisa iyo waxqabadka ay bixiso oo dhan. Nasiib wanaag, dekadaani waxay sidoo kale maanta ka baxday qaab yaab leh qaab dijital ah, marka waxaad ka iibsan kartaa eShop-ka saacadaha soo socda. Ciyaarta waxaa lagu heli karaa $ 24.99 USD.
Super qarsoodi yaab leh (kinda)!
SUPERHOT dhulalka Nintendo Switch.
Ku raaxayso dilka Red Dudes.https: //t.co/3irprLlQcphttps: //t.co/41Wh0K17Y8#SUPERHOT #IndieWorld #NintendoSwitch
– SUPERHOT (@SUPERHOTTHEGAME) Ogast 19, 2019
Ka hel dhammaan wararka ku saabsan qalabka loo yaqaan ‘console hybrid’ ee isku xirkaan Dhanka kale, halkan waxaad ka heli doontaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan warshadaha madaxa-bannaan.